Baro musharraxa kitaabka Qur’aanka ku ololeynaya [Xaaf] | KEYDMEDIA ENGLISH
Baro musharraxa kitaabka Qur’aanka ku ololeynaya [Xaaf]
Axmed Ducaale Geelle [Xaaf], waa siyaasi, oday dhaqameed iyo ganacsade rug-caddaa ah, wuxuuna ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay shirkii Carta ee horraantii 2000, halkaasoo uu ka soo qaatay kursi Baarlamaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore ee Galmudug, Axmed Ducaale Geelle [Xaaf], ayaa caawa munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho, kaga dhawaaqay inuu u taagan yahay qabashada xilka ugu sarreeya dalka [Madaxweynaha].
Kulan si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qeyb galeen Siyaasiyiin, odayaal dhaqan, haween, dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, ayuu Madaxweyne Xaaf, kaga dhawaaqay musharxnimadiisa, wuxuuna sheegay inuu dalka ku dhaqi doono Kitaabka Qu’aanka.
Xaaf, oo hal-ku-dhigga ololihiisa ka dhigtay [Ku dhaqanka Kitaabka], ayaa shegay in dhibaatada Soomaaliya ku habsatay ay tahay, garab marka Kitaabka Alle iyo ku talax-tagga qabyaaladda, wuxuunna ballan qaaday nidaam Dowladeed oo caddaalad ku dhisan.
"Boqolkiiba 90 aniga ayaa Madaxweyne noqonaya, waan hubaa aniga ayaa Madaxweyne noqonayo rumeysta, waligeey ilaahey waxa aan ka baryay ma waayo maanta baryadii roobka waan ku helnay Madaxweynenimada waan rajeynayaa", ayuu yiri.
Axmed Ducaale Geelle[Xaaf], wuxuu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Galkacyo sanadkii 1949-kii, isla magaaladaas ayuu ku soo qaatay waxbarashada hoose/dhexe, ka hor inta uusan ka qalin jabin dugsi sare ee Jamaal Cabdinasir oo ku yaallay Muqdisho.
MW Xaaf, wuxuu Jaamacadda umadda Soomaaliyeed, ka bartay Cilmiga Dhaqaalaha, wuxuu ka soo shaqeeyay Bankiga Dhexe, ka hor inta uusan dhidibada u taagin shirkadda dhismaha ee ADCO Groups, taasoo dib u howl-galisay, Garoonka NO 50 iyo Dekada Ceel Macaan.
Sidoo kale, Mr. Geelle, wuxuu ahaa aasaasihii Shirkadii Dhoofka Mooska ee SAMBANA taasoo Xiriir la lahayd Dole Group oo Mareykanka laga lahaa, waana hawlgeliyihii diyaaraddii ugu horeysay ee ka hawlgasha Soomaaliya (Daallo Airlines).
Axmed Ducaale Geelle [Xaaf], waa siyaasi, oday dhaqameed iyo ganacsade rug-caddaa ah, wuxuuna ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay shirkii Carta ee horraantii 2000, wuxuuna ka mid ahaa raggii aadka u taageeri jiray Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid.
Siyaasadda wuxuu kaga soo biiray dhanka dhaqanka, wuxuuna Xildhibaan noqoday sanadkii 2000, isagoo kursigaas ku fadhiyay muddo 16 sano, ka hor inta uusan baddelin, Axmed Macallin Fiqi, kal-doorasheedii 2016, doorasho boob ahayd oo ka dhacday Cadaado.
Burburkii Dowladdii Kacaanka ka hore, wuxuu la soo shaqeeyay qaar ka mid ah Hay’adaha Qaramada Midoobe sida; WFP, Save Children, FAO, ACRC, SOS iyo Canoko, wuxuuna ku hadlaa Sadex luuqadood oo kala ah Ingiriis, Carabi Iyo Talyaani.
May 03, 2017, Axmed Ducaale Geelle, ayaa loo doortay Madaxweynaha Galmudug, waxaana si weyn loogu amaanay doorkii uu ka qaatay in maamulku ku shaqeeyo Caasimaddiisa iyo heshiiskii Ahlusunna, inkastoo markii danbe uu hishiiskaas sababsaday.
Farmaajo iyo Khayre, ayaa ka hor istaagay inuu dhameysto muddo xileedkiisii MW-naha Galmudug, wuxuuna qaatay door nabadeed oo ah inuu tanaasulo, isagoo ka fogaanayay in lagu dul dagaallamo shacabka, sida uu dhowr jeer ka sheegay madallo kala gaddisan.